Canarias dia mampiasa ny FDCAN hamatsy ara-bola tetikasa angovo 90 azo havaozina | Green Renewable
Tomàs Bigordà | | Biomassa, Herin'ny rivotra, Angovo geothermal, angovo hydraulic, Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo avy amin'ny masoandro, Angovo azo havaozina
Ny Governemantan'ny nosy Canary dia nitatitra fa ireo tetik'asa ireo mikendry ny hitombo el fampiasana angovo azo havaozina, manatsara ny fahombiazan'ny angovo ary mampivelatra ny fivezivezena maharitra, mba ahafahana mampiditra maodely angovo mety kokoa any amin'ireo Nosy Canary.
1 Nosy Canary
1.7 Ny vy
Ireo tetikasa samihafa nomanin'ny governemanta isam-paritra hahazoana famatsiam-bola avy amin'ny FDCAN dia misy ny hetsika sy ny fepetra kendrena hanalefahana ny fitomboan'ny fitakiana herinaratra, hampihena ny fiankinan-doha amin'ny solika fôsily sy famoahana CO2, ary koa ny fitomboan'ny lanjan'ny havaozina amin'ny fifangaroan'ny angovo.
Ho fanampin'izany, hetsika maro no kasaina mifandraika amin'ny fanatsarana ny ny fahombiazan'ny angovo sy ny fivezivezena maharitra sy mahira-tsaina, amin'ny alàlan'ny fomba fitaterana maloto kokoa.
Ny governemanta dia manondro fa amin'ny Fuerteventura dia handray herinaratra amin'ny toeram-piompiana fiompiana amin'ny alàlan'ny herin'ny hery azo havaozina. tsy mifandray amin'ny tambajotra.
Ny jiro ho an'ny daholobe dia hatanjaka amin'ny angovo azo havaozina amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy, ankoatry ny fampiroboroboana ny fanjifana tena amin'ny tranom-panjakana sy ny famerenana amin'ny laoniny.
En Gran Canaria, ny fiandrasana ny Cabildo, ankoatry ny hetsika hafa, ny fametrahana turbine rivotra sy tontonana photovoltaic amin'ny zavamaniry fanodinam-bolo maro sy ny toeram-pitsaboana, ny fananganana toeram-piompiana misy rivotra telo na ny fampiharana ireo zavamaniry photovoltaic amin'ny trano ary koa ny jiro ampahibemaso miaraka amin'ny haitao LED sy ny fametrahana ny isa recharging ny fiara elektrika.
Hetsika iray hafa dia ny University of Las Palmas de Gran Canaria, Hanao hetsika efatra hanatsarana ny fahombiazan'ny angovo amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny jiro sy ny automatique an-trano, maoderina ireo fotodrafitrasa manodidina ny tranobe sy ny tafo. Ho fanampin'ny fanavaozana sy ny fampifanarahana ny fametrahana herinaratra amin'ny tranobe enina.
The Cabildo de Tenerife dia manolotra hetsika R + D + i momba ny fizotry ny fampianarana an-dranomasina ao anaty ranomasina; fanangonana angovo sy fitantanana enta-mavesatra hampihenana ny fanjifana amin'ny ITER; rafitra fanamafisam-peo hafanana hafakely entalpi ho an'ny fampangatsiahana ny D-Alix Datacenter na fandinihana ny mety ho herin'ny angovo hafanana eto amin'ny nosy hamokatra herinaratra sy ho an'ny fampiasana mafana.
Drafitra ihany koa ny famoronana Ivotoerana teknolojia azo havaozina teknolojia sy drafitra hampihenana ny fanjifana angovo amin'ireo tranom-panjakana any atsimo andrefan'ny nosy.
En La GomeraHatao ny fepetra toy ny fanomezana hazavana photovoltaic ao amin'ny tambajotran'ireo nosy ho an'ny fitaterana ny mpandeha amin'ny alàlan'ny làlana; ny famoronana tambajotram-nosy misy teboka famerenana ho an'ny fiara elektrika na ny famoronana zaridaina misy angovo fotovoltaika mifandraika amin'ny fiompiana omby.
Ao Lanzarote hametraka toeram-pambolena rivotra vaovao, miaraka amin'ny herinaratra 9,2 megawatt, any Teguise, Arrecife ary San Bartolomé, ozinina photovoltaic any Maneje ary toeram-piompiana rivotra mandevona tena ao Punta de los Vientos. Ho fanampin'izany, hisy ny asa hatao amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny angovo amin'ny jiro ampahibemaso sy fampiroboroboana ny fampiasana ny fako ho loharanon'ny angovo azo havaozina.
Any Las Palmas, ny Filan-kevitra mahita mialoha ny fandrafetana ny tetik'asa maodely vaovao momba ny angovo sy ny fahombiazan'ny hetsiky ny rivotra, photovoltaic ary ny angovo mafana amin'ny masoandro. Ho fanampin'izay, tsinjo mialoha ny fepetra momba ny fampiasana ireo vokatra azo avy amin'ny fambolena sy ny ala, ny hetsika amin'ny sehatry ny angovo mini-hay sy ny angovo geothermal, na ambany na avo entalpy.
El Cabildo an'ny El Hierro hanatanteraka fanatsarana ny tamba-jotra ary hampirisika ny fivezivezena mpandeha an-tongotra sy bisikileta a Drafitra maharitra mihetsika. Izany dia misy fihetsika maromaro, toy ny fanatsarana ny lalana Bentama, famoronana boriborintany eny amin'ny sampanan-dalana sy lalana amoron-tsiraka, lalana bisikileta vaovao, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » 228 tapitrisa amin'ny Nosy Canary Fdcan no hampiasaina amin'ireo tetikasa 90 azo havaozina
Fampiasana microalgae amin'ny fandotoana ny rano